Pipe tingcha hụrụ Manufacturers, Suppliers - China Pipe tingcha hụrụ Factory
SDC800 SDC1000 multi n'akuku mmachi hụrụ
Igwe a na-arụ ọrụ na-eme ka mmiri na-ahụ maka nrụpụta akụkụ ọkpọkọ na PE, PP na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ thermoplastic. Ejiri maka imepụta ikiaka, tee, obe na akwa ndị ọzọ. Ike 630 ka 1200mm OD. Cha n'akuku bụ ruo 67 degrees. Ẹsụhọde ọnụego nke hụrụ na-hydraulically achịkwa. Dịka a na-etinye V-clamps ndị dị n'elu iji jide ngalaba ọkpọkọ n'ọnọdụ. Jiri na atụmatụ: 1. Kwesịrị ekwesị maka ịkpụ ọkpọkọ dịka mmụọ ozi akọwapụtara na akụkụ ya mgbe ị na-eme ikiaka ...
Sadulu Radius Band Hụrụ-SRC630 SRC1000 SRC1200
Nzube wuru ìgwè hụrụ maka ịcha radius chọrọ mgbe ịgbado ọkụ na-ebelata tees n'iji SDM315, SDM630, SDM1200 sadulu fusion machine. Ma ọ bụ mgbe aka na-echepụta ọkpọkọ manifolds. Mbepu akụkụ nke ọkpọkọ na njedebe ziri ezi maka ọkpọkọ ntanye 63mm ka 315mm. >> Okirikiri ikiri na-eji bee alaka ọkpọkọ eji na mmepụta nke mbenata tees na manifolds. >> Single workstation tinyere nzube-wuru gbalaga hụrụ na okirikiri-kemeghi tinyekwa jig na obi ike alaka anwụrụ 315mm ka 1000mm. >> Pizọ Pipe ...
Sadulu Radius Band Hụrụ-SRC315
Nzube wuru ìgwè hụrụ maka ịcha radius chọrọ mgbe ịgbado ọkụ na-ebelata tees n'iji SDM315, SDM630, SDM1200 sadulu fusion machine. Ma ọ bụ mgbe aka na-echepụta ọkpọkọ manifolds. Mbepu akụkụ nke ọkpọkọ na njedebe ziri ezi maka ọkpọkọ ntanye 63mm ka 315mm. >> Okirikiri ikiri na-eji bee alaka ọkpọkọ eji na mmepụta nke mbenata tees na manifolds. >> Single workstation tinyere nzube-wuru gbalaga hụrụ na radius-kemeghi tinyekwa jig na obi ike alaka anwụrụ 63mm ka 315mm. >> Bee Pipe Dị ...
SDC315 SDC630 multi n'akuku gbalaga hụrụ
Igwe a na-arụ ọrụ na-eme ka mmiri na-ahụ maka nrụpụta akụkụ ọkpọkọ na PE, PP na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ thermoplastic. Ejiri maka imepụta ikiaka, tee, obe na akwa ndị ọzọ. Ike 90 ka 315mm OD. Cha n'akuku bụ ruo 67 degrees. Ẹsụhọde ọnụego nke hụrụ na-hydraulically achịkwa. Dị ka eji eji clamps ejiri jide akụkụ ọkpọkọ n'ọnọdụ. Ejiri na atụmatụ: 1. Kwesịrị ekwesị maka ịkpụ ọkpọkọ dịka mmụọ ozi akọwapụtara na akụkụ ya mgbe ị na-eme ikpere aka, tee ma ọ bụ cro ...